Friday, 12 Jan, 2018 2:29 PM
राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष मण्डल, राष्ट्रिय जनता पार्टी
० तपार्इंको चुनावी एजेण्डाले काम ग¥यो कि वामपन्थीको समर्थनले ?
० कसले के–के गरेका छन् भन्ने हिसाब जनतासँग हुँदोरहेछ । हिजो मधेसी जनताले अधिकार प्राप्तिको लडाइँ लड्दा अन्धाधुन्द गोली चलाउन निर्देशन दिने को थियो ? मलेठ घटनामा पनि झण्डै सयौँ जनालाई सहिद बनाउने को हो ? संविधान निर्माणमा मधेसीविरुद्ध अघि सर्ने यी मुद्धालाई जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् । सम्पूर्ण कुरा थाहा पाएपछि मधेसी जनताले बहुमतका साथ हामीलाई मत दिएर पठाएका हुन् ।
० अब बन्ने बाम गठबन्धनको सरकारप्रति भारतको भूमिका कस्तो रहला ?
– राजपाभित्र सबै नेतृत्वकर्ता एक से एक हुँदा यी समस्या आउनु स्वभाविक हो । उहाँहरुले त्यस्तो गर्न नहुने, तर भइछाड्यो । विनोद सिंह मधेसी निजामती कर्मचारी संगठनको पूर्वअध्यक्ष हुन् । अहिले राजपा जहाँ बसिरहेको छ, त्यो संगठनको भवन राजपालाई प्रयोग
गर्न दिएबापत उनलाई सांसद बनाउने आश्वासन थियो । त्यो पूरा नभएपछि पार्टी कार्यालय तोडफोड भयो । (हाँस्दै) जिन्दगीमा यस्तो पनि हुन्छ कहीँ ? यो बिल्कुल गलत हो । व्यक्तिले व्यक्तिलाई किटान गरेर यस्तो निर्णय गर्न हुन्छ ? जो कोहीले टिकट नपाउँदैमा गुनासो गर्नुपर्दैन । लामो समयसम्म राजनीतिमा त्याग, तपस्या गरेपछि यस्ता पद प्राप्त भैहाल्छन् ।
- राजपाले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भोट पाएको छ । कञ्चनपुरमा प्रत्यक्ष सिट जित्यो । एक नम्बरलगायतका क्षेत्रमा चुनाव जित्दा दुई नम्बरमै सीमित भन्न मिल्छ ? राजपा मधेसकेन्द्रित भए पनि संगठन मेचीदेखि महाकालीसम्म छ । यसबाट आगामी दिनमा कमजोर भएको ठाउँमा मजबुत बनाउने प्रेरणा मिलेको छ । मधेसको हकमा भने हाम्रो संगठन मजबुत नै छ ।
० लामो समय सँगै काम गरेका बृजेशकुमार गुप्ता, हृदयेश त्रिपाठीहरुले एमालेबाट चुनाव जिते नि !